Scorpio र लियो - एक ज्वाला र बरफ। रूपमा साहित्य उदाहरणबाट ज्ञात छ, तिनीहरूले सँगै आउन सक्छ र पनि मित्र बनाउन, तर यो शायद राम्रो समाप्त हुन्छ। दुई तत्व आगो र पानी - एउटा अचम्मको जोडी, उत्पादकत्व विश्वास गर्न गाह्रो छ जसमा। तर यी वर्ण बीच त्यहाँ एक निश्चित प्रायः रहस्यमय प्रत्येक अन्य को काखमा तिनीहरूलाई धक्का बन्धन छ। सुरुमा, आपसी आवेग पकड एक जोडी सम्बन्ध। तर तिनीहरूले भन्न रूपमा, एक सेक्स छैन ... को spouses महत्त्वपूर्ण छ भने अनुकूलता, Scorpio र लियो प्रत्येक अन्य दिन सिक्नुपर्छ। सबैभन्दा ठूलो सफलता मात्र ती साझेदार गर्ने सहयोग आधारित सम्बन्ध निर्माण पुग्न सम्भव छ।
प्रेम र sensuality लियो र आफ्नो वैवाहिक लागि Scorpio हदसम्म गणना मा आधारित छ लागि महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने तथ्यलाई बावजुद। जब लियो सफलतापूर्वक क्यारियर सीढी अप निम्नानुसार र यो साइन शारीरिक सुखसुविधा लागि धेरै-आवश्यक Scorpio प्रदान गर्न, पानी चिन्ह लागि एक प्रवक्ता एकदम आरामदायक महसुस र पनि सकारात्मक भावनाहरूको आफ्नो साझेदार संग साझेदारी गर्नुहोस्। उहाँले उत्पादक काम र राम्रो बाँकी अवस्थाको सिर्जना गर्न आफ्नो शक्ति मा सबै गर्न, सबै प्रयासहरूलाई मा सिंह समर्थन गर्न खुसी हुनेछन्।
तर, जोडी राम्रो सामाजिक सफलता को बाटो, चरण मा मार्चिङ हटाउन सक्छ। यस मामला मा के अनुकूलता असर गर्न सक्छ? Scorpio र लियो क्यारियर को क्षेत्र मा विफलताको पनि संवेदनशील हुन्छन्। यो साझेदार परिवार मा परिचालन समस्या हस्तान्तरण हुनेछ भने तिनीहरू भ्रष्टाचार उम्कन सक्दैन भन्ने हो।
घरमा आदर र बच्चाहरु संग Scorpio र लियो एक जोडी उल्लेखनीय समान छन्। सर्वश्रेष्ठ होस्टहरूको र आमाबाबुको पाउन गाह्रो छ। लियो लक्जरी र आराम प्रेम, Scorpio सिर्फ एक आरामदायक घर को सपना छैन, उहाँले सक्रिय छ। खुशी योजना, मरम्मत संग, बनाउछ र rebuilds। शिक्षा मामिलामा लियो र Scorpio पनि छिटो kontsensusu आउँछन्। ती दुवै मायालु र ध्यान दिएर आमाबाबुले छन्, तर सिंहले सधैं Scorpio यो कुरा मा पाम दिन तयार छन्।
समझौता र आपसी सहुलियत बिना हासिल छैन, र अनुकूलता - व्यक्तिगत जोडीलाई गठन गर्दै सम्बन्ध सजिलो छैन। प्रेममा Scorpio र लियो पनि फरक दृश्य। Scorpio - मनोवैज्ञानिक चाल को एक मास्टर: उहाँले निरन्तर अन्दाज लगाउनु, आफ्नो आधा लागि प्रमाणिकरण भावना उठयो। उहाँले सधैं एक्लै शो चलान accustomed थियो किनभने लियो, यस्तो अवस्थामा रीस उठाउनु गर्न सक्दैन। Scorpios प्रेम सम्बन्ध को लागि - यो सधैं एक आध्यात्मिकता, कामुकता र chuvstvennost.Lev थप mundane र prosaic, एक सम्बन्ध मा, त्यो अझ बढी ध्यान आफ्नो प्रिय गर्न, बरु साझेदार भन्दा दिन्छिन् छ।
अनुकूलता को यस्तो जटिल मामला मा achievable के? Scorpio र लियो पनि जाने छ असहमत बाटो तपाईं हृदय मामिलामा सद्भाव पाउनुहुनेछ अघि। ठूलो सहुलियत मा एकै समयमा बस Scorpio, त्यो गलत थियो भन्ने तथ्यलाई सहमत भन्दा साझेदार संग भाग लियो भन्दा किनभने जाने छ। एक जन्म मनोवैज्ञानिक रूपमा Scorpio प्रक्रिया लिनुपर्छ सम्बन्ध स्थापना को आफ्नो नियन्त्रणमा। साझेदार अक्सर आवश्यक दोश्रो देखि आराम। छुट्टी वा सप्ताहन्तमा, यो जोडी मात्र लाभ हुनेछ अलग बिताए।
अक्सर साझेदार यो समय मौलिक आध्यात्मिकताको मुद्दाहरू हेर्नुहोस् को एक बिन्दुमा diverge रूपमा विवाहित दम्पतीले लियो र Scorpio वयस्कता मा विभाजन। यसबाहेक म्युचुअल असंतोष धेरै वर्ष को लागि जम्मा, एउटै बाँध धैर्य Scorpio खण्डन।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, अनुकूलता Horoscope लियो र Scorpio - विरोधाभास र जटिलताओं को एक टेङ्गल छ। महिला - विशेष गरी कठिन जोडे जहाँ Scorpio को सम्बन्ध हो। साझेदार सधैं शाही व्यक्ति घटेका सुइट, संग सहज गर्न निकै डाह। शारीरिक विश्वासघात कुरा छैन भने पनि, महिला Scorpio नै प्राण-खोज्ने लागि एउटा कारण संग आउनुहोस्। प्रेममा लियो र Scorpio व्यवहारलाई हेर्ने, हामी यस सम्बन्ध भावना संग बढ्तै भनेर भन्न सकिन्छ। तनाव अक्सर अपरिहार्य विस्फोट कि यस्तो शक्ति पुग्छ। यो जोडी एक मध्य जमीन फेला पार्न प्रयास, प्रेम र घृणा बीच किनारा सधैं ballansiruet। तर, दुवै साझेदार खातामा प्रत्येक अन्य को व्यक्तिगत विशेषताहरु लिन सिक्न भने, आफ्नो संघ धेरै फलदायी हुनेछ।
परमेश्वरको चुम्बन: मकर र Scorpio - एक शो-संघ बारेमा!
घडी बारेमा सोच र पहेलियों विकास
किनारमा मा Catfish donk पक्रने। Catfish लागि मत्स्य पालन - सही उपकरण, सबै भन्दा राम्रो चारा र एक ठाउँको खोजी
मारिया Riva - अभिनेत्री को जीवनी
हटाउन सकिने ह्यान्डल फलाम संग धूपदान: वर्णन, लाभ र बेफाइदा
टर्कीलाई कसरी खुवाउने र तिनीहरूलाई कसरी बढाउन सकिन्छ?
नवजात छोरा संग बधाई
क्यान्ड सूप -, छिटो हार्दिक र स्वादिष्ट